တစ္ဆေကဖီး: August 2009
ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အယူအဆ တခုဟာ ကဗျာရေးသူနဲ့ကဗျာဖတ်သူ သိပ်မကွာဝေးဘို့၊
ကဗျာရေးသူဟာ ကဗျာဖတ်သူရှေ့ ခြေလှမ်းသိပ်မကျဲဖို့၊ ကဗျာရေး
သူနဲ့ ကဗျာဖတ်သူ တတ်နိုင်သ၍ ကဗျာအပေါ် အကွာအဝေး နီးစပ်နိုင်သမျှ နီးစပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်၊
ဘယ်အယူအဆမဆိုဟာ သူပေါက်ဖွားရာဆက်စပ်ဝန်းကျင် အနေအထား
နဲ့ အမှန်တရားနီးပါး ခိုင်မာချင်သလောက် ခိုင်မာလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်..ကျွန်တော်
ပထမဆုံး အချက်က ကဗျာနဲ့ ကဗျာရေးသူအကွာအဝေး။ အကယ်၍ ကဗျာနဲ့
ကဗျာရေးသူကြား အကွာအဝေး မရှိသလောက် နည်းပါးတယ်ဆိုရင်.. ကဗျာဆိုတဲ့
ဆန်းသစ်ခြင်း၊ လန်းဆန်းခြင်း၊ ရုတ်တရက် သစ်ဆန်းလို့ စိမ်းခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ
မပျောက်ကွယ်သည့်တိုင်အောင် လျော့ရဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာရေးသူဟာ ကဗျာ
ရေးခြင်းအပေါ်မှာ မရောက်ဖူးသော အရပ်တခု ရှာဖွေခြင်းအလုပ် မလုပ်တော့ပဲ
အလွယ်တကူ ရောက်ပြီးသားအရပ်ကိုပဲ လွယ်လင့်တကူအထပ်ထပ်အခါခါ ဆက်သွား
ဥပမာ….အကယ်၍ ကဗျာရေးသူ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ရောက်ဖူးပြီးသား အ
ရပ်ဒေသကိုသာ ထပ်ဖန်တလဲလဲ မငြီးမငွေ့ ပြန်ရေးဖွဲ့ပြနေရင် ကဗျာဖတ်သူအတွက်
အကျိုးဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ အကယ်၍ အဲဒီကဗျာရေးသူရဲ့ မရိုးမအီ အဲဒီနေရာကို
ကဗျာဖတ်သူတွေထဲက ရောက်ရှိဖူးရုံတင်မက နယ်ပယ်သစ်တွေအထိ ဆက်စမ်း သွား
နေကြပြီ ဆိုရင်ကော။ ကဗျာရေးသူရဲ့ အသစ်ရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့ကဗျာအလုပ် ကျင်လည်
ရာ အရပ်ဒေသမှာပဲ မျက်လုံးကလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ မသေမရှင် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်
ဒုတိယက…ကဗျာဖတ်သူနဲ့အကွာအဝေး။ “ကဗျာဖတ်သူ“ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံး
ဟာ အားလုံးသဘောတူ လက်ခံထားတဲ့၊ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ လုံးဝမရှိတဲ့ အ သုံးလုံး
ကျေပြီးသူအတွက် ရှင်းလင်းတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဦးစွာသတိချပ်သင့်ပါတယ်
ကဗျာဖတ်သူတွေထဲမှာ အသက်အရွယ်၊ ရင့်ကျက်မှု၊ ကဗျာဖတ်ခြင်း အတွေ့အကြုံ
ကဗျာဖတ်ခြင်းအပေါ် သဘောထားပုံ၊ သိ၍သော်လည်းကောင်း၊ မသိ၍သော်လည်း
ကောင်း၊ ကဗျာအပေါ် သဘောထားပုံ၊ ကဗျာရဲ့ အကျယ်အ၀န်းနဲ့ အတိမ်အနက်၊
ဘယ်၍ဘယ်မျှ ထောက်ရှုထားပုံ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး အစားစား ကွဲပြားနေမှာဖြစ်
အဲသလို အမျိုးမျိုး အစားစား ကွဲပြားတဲ့ ကဗျာဖတ် ပရိသတ်ထုကြီးကို၊
“ ပြည်သူ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အလွယ်တကူ တစုတဝေး အဓိပ္ပါယ်မတပ်ဘို့ အရေး
ကြီးပါတယ်။ ‘လေးလုံးစပ်ကဗျာ’ကိုမှကဗျာထင်တဲ့သှူ‘ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ’ကိုမှကဗျာထင်
တဲ့သူ၊ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနားလည်ပြီး ဆိုလိုရင်းအကြောင်းအသိထဲ ဒိုင်းကနဲရောက်
သွားမှ ကဗျာလို့ ထင်မှတ်ထားတဲ့သူ၊ ခံစားချက်ပါမှ ကဗျာဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူထား
တဲ့သူ စသဖြင့် ကွဲပြားမှုကိုယ်တိုင်ဟာ ကဗျာနဲ့ ကဗျာဖတ်သူကြား အကွာအဝေးတွေ
အလိုလို ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ဖြစ်နေလျက်၊ ဖြစ်နေဆဲ..ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကဗျာနဲ့ ကဗျာဖတ်သူ
ကြား လက်ဦးမဆွကတည်းက ရှိခဲ့ပြီးတဲ့ အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကွာအဝေးကို
ထင်ဟပ်ပြတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ရှိတန်ခြေ၊ ဖြစ်တန်ခြေ တွေကို ရှေ့က လမ်းထွင်သွား
တာလား။ ဒါဟာမိမိကိုယ်မိမိကဗျာဆရာလို့ ရိုသေလေးစားစွာ၊သစ္စာရှိစွာမကွယ်မ၀ှက်
စီးချင်းထိုးမေးရမယ့် ကဗျာရေးခြင်းဆိုင်ရာ မူလ အခရာ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ
ကဗျာဟာ နိုင်ငံရေး လက်အောက်ခံ၊ ကဗျာဟာ ပြည်သူကို အကျိုးပြုရင်၊ ကဗျာနဲ့
ပြည်သူတသားထဲ၊ ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ရတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ မီဒီယာ လှုံ့ဆော်မှုတွေ၊ အုပ်စုဖွဲ့ စုရုံး အင်အားသုံးမှုတွေ၊
‘ရေးသက’် ၊ ‘သမ္ဘာ ‘၊ ‘ဘ၀မှာ မည်ရွေ့မည်မျှ အဆုံးရှုံးခံဘူးတာ..‘ စသဖြင့် တွေနဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ
သူရဲကောင်းလုပ်ပြီး တပည့်မွေးတာ၊ …………တွေဟာလည်း ရှိဖူး၊ ရှိဆဲ၊ ရှိလတ္တံ့ပေါ့။
ဒါပေမယ့်.. မိမိကိုယ်မိမိ မကြုံစဖူး အရေခွံနွှာ ရဲရဲမေးလိုက်ပါ။ အဲဒါ……
နိဂုံးချုပ်ရရင်..ကျွန်တော့်ပုဂ္ဂလိကအမြင်အားဖြင့် ကဗျာရေးသူနဲ့ ကဗျာအကွာ
အဝေးဟာ ရှိကို ရှိနေမှာပဲ။ ကဗျာဖတ်သူနဲ့ ကဗျာ အကွာအဝေးဟာ ရှိကိုရှိ နေမှာပဲ။
ကဗျာရေးသူ အနေနဲ့ မိမိကဗျာအလုပ်ကို မိမိ လုပ်ခြင်းကသာလျင် မိမိရဲ့ အလုပ်
အပေါ် သစ္စာရှိခြင်းလို့သာ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
၅ ဇူလိုင် ၂၀၀၇
ကဗျာ ဘ၀ ရှာတော်ပုံ စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
Posted by mgphonemyint at 10:45 PM 1 comment:
Posted by ATN at 7:14 AM 1 comment:
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိဘ၊ ဇနီး၊ သား ၊သမီး၊မြေးမြစ်နဲ.အချစ်ကလေးများက ဘေးမသီရန်မခပဲအိမ်အပြန်
စောင့်မျှော် နေကြသည်ကိုသိရှိကြပါသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမွန်မြတ်သည်ဟု ဆိုသော်ဤသစ္စာအဓိဌာန်အ
လုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့သဘောနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံရွေးချယ်နိုင်ခွင့် ရှိသည်ကိုလည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် မော်တော်ယာဉ်စီး လုပ်သားပြည်သူများကို ယေဘူယျအားဖြင့်ယဉ်ကျေးချေငံစွာဆက်ဆံကြပါ
သည်။ သို့သော် မတူသော တက်လိုက် ဆင်းလိုက် စိတ်ကူးအမျိုးမျိုးဖြင့် မျောနေသော လူအများကိုခရီးစဉ် အစအဆုံး နေမထွက်ခင်မှ မိုးစုံးစုံးချုပ် ဆက်ဆံ ပြောဆိုနေရခြင်း ၊ သက်ဆိုင်ရာစ ည်းပိုင်ကမ်းပိုင်တို့၏ အရိပ်အကဲ၊နေ့တွက်ကိုက်ရန် အစဉ် မျက်စိလျင်အော်ဟစ်နေရခြင်း တို့ကြောင့်အလျင်စလိုအပြောအဆို လေယူ လေသိမ်းများရှိခဲ့သော်ဤနေရာမှအညွတ်အနူးတောင်းပန်အပ်ပါသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မိန်းမတို့သည် ဒီနေ့အ၀တ်တမျိုးဝတ်ပြီး ဟင်းတမျိုးချက်ကာ နောက်တနေ့နောက်အ၀တ်တမျိုး
ဖြင့်ဟင်းအမယ်တမျိုး ပြောင်းလျက်နေ့စဉ် ဖန်တီးကြပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် လွန်ခဲ့သော အနှစ်နှစ်ဆယ်ခန့်
က၊ဆယ်နှစ်ခန့် ကခရီးသည်များနှင့် ဆက်ဆံနေရခြင်းမဟုတ်မူပဲ ယနေ့ခရီးသည်များနှင့်ဆက်ဆံနေရသောa
ကြောင့် ယနေ့အတွေးကိုပဲ တွေး ကြရပါသည်။
ဟိုယခင် သိမှီလိုက်သူများအဖို့ သစ်သားဘတ်စ်ကားအိုကြီးပေါ် မောင်းသူအဖိုးကြီး၏ ဒူးတ၀က်လှန်လေ၀င်ပုဆိုးနှင့် ရောင်းသူအဖိုးကြီး၏ မှတ်တိုင်ပါသည်ဆရာဟူသောကွမ်းမြုံ့သံ၊ငါးပြားစေ့ ဆယ်ပြားစေ့ မတ်စေ့ငါးမူးစေ့ ကျပ်စေ့ အလေးစေ့ အပေါ့စေ့ထည့် လွယ်အိတ်ကြီးများ၊ကွမ်းစားထားသော လျှာပေါ်မှ တံတွေးဆွတ်ပြီး လက်မှတ်တစောင်စီ အေးဆေးစွာ ဆွဲဖြုတ်လျက် လေတဖြူးဖြူး စီးရသောခေတ်လည်း မဟုတ်တော့ပါချေ ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် လမ်း၊မီးပွိုင့်၊မှတ်တိုင်၊မော်တော်ယဉ်ပေါ် အချိန်မရွေး ကြုံလာရနိုင်သော အခက်အခဲများကို နေ့
စဉ် နည်းအားဖြင့် တွက်ဆနိုင်ကြပြီး ရရှိသော ၀င်ငွေအားဖြင့် ရပ်တည်ကြရပါသည်။ မနေ့ကအကြောင်းများကို
အချိန်များစွာ မစဉ်းစားနိုင်ပါ၊ မနက်ဖြန်လာမည် သေချာသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ပိုပြီးသေချာ ထားရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ရန်ရှိသည် များကို နေပူပူ မိုးရွာရွာ ပြီးစီးအောင် လုပ်ရပါသည်၊ငြီးငွေ့စရာနေ့စဉ်အပြောအဆိုများ ကြားမှ စကားလုံးအသစ်များ ရလာသလို ဆွဲသုံး၊လိုအပ်က ထင်ဟပ် ထွင်းဖောက်လိုက်ရခြင်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်ယင်းဖြေဖျော်ကြရပါသည် ။
ထို့ကြောင့်ပင် အချို့သော ကဗျာဆရာများသည့် ကျွန်ုပ်တို့အား တမင်လ္ဘက်ရည်တိုက် ထမင်းကျွေးပြီးကားနား
ချိန်များတွင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးအနှုန်းများကို စိတ်ရှည် လက်ရှည် မှတ်သားသွားလေ့ရှိပါသည် အတိတ်ကိုပြန်
တွေးသော် အမောပြေသည်နှင့် တပြိုင်နက် အနာဂါတ်အတွက် မျက်နှာမူခြေကားထားရပါသည်။ အကယ်၍လို
အပ်ပါက မိုက်ရမည်ဆိုပါမူ ရှေးရေဒီယိုလူရွှင်တော်ကြီးများ ပြက်လုံးအတိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေါင်းမှချုပ်ရာထစ်ရာများသာ ကြည့်ကြပါကုန် ။
Posted by mgphonemyint at 1:39 AM2comments:
တချို့က ရေပေါ်မှာ အရုပ်ရေးတယ်
တချို့က အများသိစေရန် ကြေညာချက်ရေးတယ်
Posted by Moe Hlaing Nya at 2:21 PM2comments:
ငွေခြောက်သောင်းတန် ဖိနပ်တစ်ရံကို သဘောကျမိတဲ့နေ့မှာ ထောင့်နှစ်ရာတန် တာယာဆိုလ်းပြားနဲ့ ဖိနပ်လေးတစ်ရံကို ကျွန်တော်သတိတရ ရှိသွားမိတယ်….။ အဲဒီတုန်းက လေးတိလေးကန် နေ့စွဲတွေကို အားမလိုအားမရ ဖြတ်သန်းနေရချိန်ပေါ့။ ဘ၀ဆိုတာ အညိုရောင်ပါလို့ စိတ်ထဲက အမာရွတ်တွေကို ပွတ်သပ်နေမိတုန်းလေ။ ကောင်းကင်က ကမ္ဘာဖျက်မိုးလားလို့ ထင်မှတ်မှားအောင်သိပ်သည်းနေပါတယ်။ တတိယလှိုင်းလုံးနဲ့ တတိယကမ္ဘာမှာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ခေါင်မမြဲတဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံအတွက် စိတ်ထဲမှာ မွန်းကျပ်နေပါတယ်…။ ထင်မှတ်ထားတာထက် ပိုမိုခိုင်ခန့်နေတတ်တဲ့ ဆင်းရဲသား ဖိနပ်တစ်ရံဟာ ခရီးတို၊ ခရီးလတ်တွေအတွက်၂၀ကျပ်တန် ဘတ်စ်ကားကို ကြွားကြွားဝါ၀ါမစီးတတ်တဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ၀ါးစားနေသလား ထင်မှတ်ရအောင် သက်တမ်းကုန်ရက်က သိပ်နီးကပ်နေပါတယ်။ လမ်းများတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် နှစ်လတန်သည် သုံးလတန်သည်မှာ ဖိနပ်အသစ်တစ်ရံ ၀ယ်စီးရလေ့ ရှိပါတယ်။ တခါတရံ ငွေကြေးပြတ်လပ် နေတဲ့အချိန်မှာ ဖိနပ်ချုပ်သည် ဂတ်စ်ဖြည့်သည်ဆိုတဲ့ ၃၈လမ်းထိပ်က ကိုတင်သန်းနဲ့ စကားစမြည် ပြောနေခဲ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရန်ကုန်နေ့စွဲတွေထဲမှာ ဖိနပ်မပါဘဲ လျှောက်သွားဖူးတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ ကြာသပတေးလား၊ သောကြာလား မသေချာပေမယ့် အဲဒီနေ့က အိပ်ကပ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံပြတ်နေတာ သေချာပါတယ်။ မိုးကလည်း တစိမ့်စိမ့်စွေလို့ပေါ့။ မနက်ရုံးလာကတည်းက ကတ္တီပါသဲကြိုးက နဲ့တဲ့တဲ့။ ပြတ်မှာစိုးလို့ ဖိနပ်ကို ခါးကြိုးထိုးပြီး လမ်းလျှောက်ချင်ပေမယ့် မြည်းတစ်ကောင်နဲ့ သားအဖလို့ ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်များ စောင်းမလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ခြေတစ်လှမ်း သိစိတ်တစ်သန်းနဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဖိနပ်ကို နှမြောတဲ့ စိတ်ကလေးသာ ဖယ်ထုတ်လိုက်ရင် တစ်မဂ်တစ်ဖိုလ်များ ဆိုက်ရောက်လေမလားကို ထင်မှား တွေးမိသေးတယ်။ ရုံးရောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ဂေါ်လီတစ်လုံးလို လှိမ့်ဖို့ အလုပ်တွေက တပုံတပင် စောင့်နေတယ်။ ပထမဆုံး သွားရမယ့်ခရီးက ကမ်းနားလမ်းပေါ်က ဂျာနယ်တိုက်တစ်ခုမှာ ကြော်ငြာထည့်ဖို့၊ ဒုတိယက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသစ်ထဲက ဆေးဆိုင်အမှာတွေ သွား ကောက်ဖို့၊ တတိယအလုပ်က အထက်အရာရှိ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားဝယ်ဖို့နဲ့ သူ့ကိုယောက်ျားစစ်မှန်ကြောင်း အာမခံအားတိုးဆေးဝယ်ဖို့၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးမ အတွက် လက်ကိုင်အိတ်ဈေး မေးခဲ့ဖို့စတာတွေနဲ့ ကျွန်တော်ကို ရုံးအမိုးအောက်ကနေ အပြီးသတ် ကန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ရက်စက်လှချည်လား . . . မိုးရယ်…။ ၁၅၀၀ တန် ထီးတစ်လက်နဲ့ ခုခံကာကွယ်လို့ မရနိုင်အောင် မိုးစက်တွေက ကတ္တရာလမ်းပေါ် တဖြောင်းဖြောင်း ရိုက်ချနေပါတယ်။ မိုးတွေ သိပ်များလို့ အလုပ်နားနေလို့ မရတဲ့ဘ၀ဆိုတော့ အသက်တစ်ပိုင်းကို ရွှဲစိုစေချင်လည်း ရွှဲစိုခိုင်းလိုက်ရုံပေါ့။ တခါတလေ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကို သံထည်သံသားလို ယုံကြည်မှုထားခဲ့ဖူးတယ်။ လတ်တလောအချိန်မှာ စိတ်ပူ နေရတာကတော့ ကိုယ့်အောက်မှာ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ ဖိနပ်ကိုပါပဲ။ ကိုယ့်ထက် အောက်ကျတယ်ဆိုပြီး သူ့ကို မလေးစားလုပ်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ မနက်က ရုံးကိုလာတဲ့ သမာဓိကို ပြန်လည်စုပ်ယူပြီး သကာလ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တစ်စုံကို ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ် ရွေ့လျားလိုက်တယ်။ တစ်လှမ်း၊ နှစ်လှမ်း၊သုံးလှမ်း၊ ခြေလှမ်းသုံးဆယ်၊ ခြေလှမ်းငါးဆယ်၊ ခြေလှမ်း၂၀၀ အရောက်မှာ . . .။ မတော်လို့ပါ . . . ဆောရီးနော် . . .။ ဖောက် . . .။ ကမ္ဘာကြီးကို ချောက်ချောက်ချားချား နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ သိမှတ်စိတ်တွေက အပူချိန် တက်လာတယ်။ လူတွေက ဆူးလေမီးပွိုင့်ထိပ်မှာ ခြေချင်းလိမ်နေတယ်။ ကျွန်တော့်မှာသာ ကမ္ဘာလည်နေတာကို ရပ်ရမလို၊ မသိလိုက် မသိဘာသာ လိုက်လည်ပြရမလိုနဲ့ မတ်မတ်ကြီး ငူနေမိတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဖိနပ် အပြတ်တွေ စွန့်ပစ်ထားခွင့် ရှိမရှိ၊ ဒါမှမဟုတ် ဖိနပ်အပြတ်တစ်ရံကို ကိုင်ပြီး ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင် ရောက်တဲ့အထိ ရှေ့ဆက်သင့် မသင့် ဝေခွဲရခက်နေပါတယ်။ ဒီအရပ်က လူတွေကိုကြည့်ရတာ ဖိနပ်ပြတ်ဖူးပုံ မပေါ်ဘူး။ သစ်သစ်လွင်လွင် ဖိနပ်ဆိုင်ကြီးတွေကို ကျွန်တော် မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်နေမိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မသိမသာ ပလက်ဖောင်း ဒေါင့်စွန်းမှာ ဖိနပ်အပြတ်လေးကို စွန့်ပစ်ထားခဲ့တယ်။ မနက်ရောက်ရင်တော့ မြို့တော်သန့်ရှင်းရေး ၀န်ထမ်းက ကျွန် တော့်အပေါ် ကျိန်ဆိုနေမှာ အားနာနာနဲ့ မြင်ယောင်မိရင်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာလို့ စိတ်ထဲက တောင်းပန်နေမိလိုက်ပါတယ်။ မှန်တံခါးကို တွန်းဖွင့်ဝင်လိုက်တော့. . .။ ဖိနပ်စီးလို့ရပါတယ်ရှင် . . . ။ ဗျာ . . .။ ဟို ကျွန်တော့်ဖိနပ်က ရေတွေအရမ်းစိုနေလို့ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကို လိမ်ရတဲ့အခါ နံရံပေါ်က ကိုယ်မျက်နှာကိုယ် ပြန်မကြည့်ရဲ သလိုပဲ။ ပြောင်လက် နေတဲ့ ကြွေပြားနံရံပေါ်က ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် ပြန်ခိုးကြည့်မိတယ်။ ထည့်နေကြ ကြော်ငြာပဲ။ ဟုတ်ကဲ့၊ နှစ်သောင်း ငါးထောင့်သုံးရာ။ ကျွန်တော့်ကို ဘောက်ချာလေးဖြတ်ပေးပါ။ ဟူး . . . လေထဲကို စိုးရိမ်စိတ်တွေ မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေ များသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါကမ္ဘာကြီးရေ . . .။ အစ်ကိုဒီမှာ မိုးတွင်းစီးတွေ ထောင့်ငါးရာ။ ဖိနပ်မပါမှန်းသိလို့ ပလက်ဖောင်းဈေးသည်က အတင်းခေါ်ရောင်းနေတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီမှာက ၂၁ရာစုကိုဖြတ်သန်းဖို့ လက်ကျန် ငွေနှစ်ရာပဲ ရှိတော့တာ။ ဖိနပ်မပါတဲ့ အတူတူ မထူးဘူးဆိုပြီး အဲဒီနေ့က ဆူးလေဘုရားတက်ဖူးခဲ့တာလည်း အမှတ်ရနေတယ်။ မိုး တွေက ပိုပြီးသိပ်သည်းလာတယ် ။ ဘုရားစောင်းတန်းက ဖိနပ်အပ်ရန်ဆိုတဲ့ ကောင်တာနားထိုင်ပြီး မိုးသည်းထဲက အတွေးစတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရယ်မောနေမိသေးတယ် . . .။ အစ်ကို ဒီဖိနပ်ယူမှာလား . . .။ ဗျာ . . .။ ဟုတ်ကဲ့ မယူသေးဘူးနော် . . . ။ အစ်ကို ဖိနပ်ကိုထိုင်ကြည့်နေတာ ဆယ်မိနစ်တောင်ရှိပြီ . . .။ ဟုတ် ဆောရီးနော် . . .။ တောင်းပန်ပါတယ် . . .။ အတွေးလွန်သွားမိလို့ပါ. . . ။ ဖိနပ်တစ်ရံက ကျွန်တော့်ကို ဆက်ရန်ရှိသော မနက်ဖြန်များဆီကို ဆွဲခေါ်ယူသွားပါတော့တယ် . . .။
Posted by Moe Hlaing Nya at 4:47 PM5comments:
ပြဿနာ စိတ်ကူးဥာဏ် လေးနက်တဲ့သိပုံသိနည်းတမျိုး
မကျော်လွှားခင် ခြေတဖက် လေထဲတွဲလောင်း အဲဒါ ငါမသိဘူး
စိတ်ကူးနဲ့တွန်းကြည့်လို့ရတဲ့ နေရာတခု အခု ခြုံငုံဆင်းရဲမှု
တုံ့ပြန်မှု ယနေ့အခါများ ပေတံများ ကိုက်တံများ စည်းမျဉ်းခံ အာရုံခံစားမှုများ
အတွေးထည်နဲ့ချဉ်းကပ်လို့မရတဲ့ ဗိုက်ဆာနေပုံ တင်းခံပေးတဲ့ အဆောက်အအုံ
ထို့ကြောင့် သော်ငြားလည်း ဒီနေ့မိုးလေ၀သအကြောင်းထက် မနက်ဖြန်ကိုကြေငြာပုံ
၀ိသေသ ပြဿနာ ကဗျာကြားခံပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး တံတားမဟုတ်ဘူး
အားဖြင့် မှတဆင့် မဟုတ်ဘူး အလင်းလိုလေလို အပိုပစ္စည်းလို ငါတို့
မှားခဲ့ကြ ဘာမဲ့ရင်မဲ့ပါစေ ဘာမမဲ့ပါစေနဲ့ အဲသလိုကွဲပြားတော့ ငါတို့ခြားနားသွားတာပေါ့
အလေးအနက်ထားမှုရဲ့ နောက်ဆုံးကတုတ်ကျင်း ဒီတွင်းမှာပဲ လောင်စာ
ပြဿနာကိုထပ်ရှုပ်စေတာ ပြဿနာရဲ့ စွဲငင်အား/စွမ်းအား
သမိုင်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လိင်ဆိုင်ရာ
တပိုင်းအားဖြင့် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာအမြဲဖြစ်နေလို့
(ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား ဆိုပါစို့၊ဥပမာ) ခေတ်ရေစီးကြောင်းပြင်ပလား
ကမ်းပါးပေါ်ကသစ်ပင်တွေ သစ်ပင်တွေပေါ်က တိမ်တိုက်တွေပေါ့
သူတို့ကော ရေမှာမထင်ဟပ်ဘူးလား သိပ်ဝေးဝေး မရောက်သေးပါဘူး
‘အက်စ်တက်တစ်က်’ ဟာ ဂရိ ‘အက်စ်တီးဆစ္စ'က
မူလ ဂရိ မှာ ‘အာရုံကို/ ဖြင့် သိမြင်ခြင်း’ ‘အဆင့်မြင့် ဆင်ခြင်တုံတရား’ရဲ့
အပါးလွှာဆုံး/ အနူးညံ့ဆုံး အရေပြား စိတ်(၀င်စားရေး) ကိရိယာ
ဦးမှင်တံ ခွာလိပ်ပုံဟာလည်း ရည်ရွယ်ချက်တခု
ရည်ရွယ်ချက်တခုခု... လိုလို ပြောနေတာလား
သိမြင်ခံစားဖို့ သင်ယူလေ့ကျင့်ထားသလောက် ‘ပေါင်မုန့်မရှိရင် ကိတ်မုန့်စားကြ’
ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြဘို့ ဘယ်အရှင်လတ်လတ်ကို ဘယ်မှာပိုင်းဖြတ်မလဲ
အခြေခံဒြဗ်သားတွေဟာ စကားလုံး အမြဲဖွဲ့စည်းရ ထိုရောအခါဝယ်
အကျည်းတန်ခြင်း=ပုံသဏ္ဍာန်အတွင်း သွတ်သွင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခြင်း
တနေရာရာရောက်ဖို့ အဝေးကြီးသွားပြီး အနီးလေးမှာ ကွေ့ရကာ
သတ်မှတ်ထားချက်များမှ ကပ်သီးကပ်သပ် လွတ်မြောက်နေဘို့
(ခင်ဗျားလည်းဖတ်ဖူးတဲ့ အချို့လိုင်းတွေမှာ) ဒါဘယ်သူ့သံသယ
ထူပိန်းမှုများ ပါးလွှာမှုများ လုံးထားတဲ့စကားများ
အနည်းဆုံးတော့ သိပြီးသား သပ္ပရနံပေါင်းကို သံပြေလေးနဲ့
သံချိုသွေး မနေချင်တော့ဘူး ကြိုတင်မှတ်ချက်ချထားတဲ့အဓိပ္ပါယ်
ဘာတခုမှမရှိသေးတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက် ခြားနားသောအရာတခု
တသက်မမေ့နိုင်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာ ခံစားမှုကြီးများ
၁၉ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၇
Posted by mgphonemyint at 10:20 PM 1 comment:
သေမင်းဟာ မိတ်ဆက်စာတွေလဲ ခဏခဏရေးတယ်
မြို့တကာ ရွာတကာ သူလှည့်လည်လေ့ရှိတယ်
ငါ ကဗျာတွေရေးရဦးမယ်ကွဲ့။ ။
အမှတ်(၆)၊ မေလ ၂၀၀၇
Posted by mgphonemyint at 2:00 AM 1 comment:
ဟိုမှာ.. မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းရဲ့ခေါ်သံ ကြားသလား…။
ခရုတွေ ကယုကယင် မပြေးလွှားနိုင်တော့
ပင်လယ်က ငိုကြီးချက်မ မျက်ရည်လည်ရွဲ စိုရွှဲနေတယ်
ပင်လယ်က မြစ်တစ်စင်းကို အူယားဖားယား တအားလှမ်းဆွဲထားရတယ်
ပင်လယ်က တိမ်တွေထိုးထားတဲ့ နီဝါရောင်ဆလိုက်တွေအောက် မှောက်ရက်လဲတယ်
ပင်လယ်က လရောင်ကို အုန်းလက်ကိုင်းဖျားနဲ့ ချိတ်ရုံလေး ချိတ်ထားနိုင်တော့တယ်
ပင်လယ်က ရေပြင်ပေါ်ကချော်ကျ သန္တာတန်းတွေကြား ပြတ်ရွေ့သွားတော့မယ်
ပင်လယ်က ငါ့နောက်ကျောကို အသွားနက်နက်လှိုင်းတွေနဲ့ ၀ုန်းကနဲ ထိုးစိုက်လိုက်တော့မယ်။
(အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကဗျာကို frame ပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ မှတ်ချက်များနဲ့တော့ မဆိုင်ပါ။ နောက်ထပ်မှတ်ချက် လက်မခံတော့ပါ။ 21 August 2009 )
Posted by pandora at 11:11 PM 11 comments:
`ဘယ်သူက ခဏခဏ လာခိုင်းလို့လဲ´
Posted by Moe Hlaing Nya at 10:53 AM2comments:
အနိစ္စနဲ့ အနတ္တကိုပဲ ရွတ်ဆိုနေကြ
ဆုတ်ဖြဲ ချိုးဖဲ့ လိုက်စမ်းပါ...
ဂုတ်ဆွဲ ထိုးထည့် လိုက်စမ်းပါ...
Posted by ATN at 5:24 PM 1 comment:
Posted by ATN at 1:30 PM No comments:
Posted by Moe Hlaing Nya at 11:44 PM 1 comment:
Posted by ATN at 8:08 AM2comments:
( အခုတော့ ခုနစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ )
ဘုရား၊ သိမ်ကျောင်း၊ ဇရပ်နဲ့
၃၇ လမ်းပေါ်က အထက်တန်းကျောင်းအိုလေးကို
လားရှိုး king မှာ ၀င်ထိုင်
Posted by Moe Hlaing Nya at 11:57 PM2comments:
ငါ့ ကြည်နူးမှု လှိုင်းအိလေးတွေ သင့်ကျောကုန်းပေါ်ဖြန့်ခင်းလိုက်ပါရစေ။
သင်နှစ်မြုပ်ဖျောက်ဖျက်ထားတဲ့ ပုလဲရတနာတွေ ပြန်ဖော်ထုတ်ခွင့် ရပါရစေ။
၀င်သက်ထွက်သက်ရှုရှိုက်တိုင်းသင့်ရေတက်ရေကျနဲ့ ပြေပြစ်ညီညွတ်ခြင်းဂီတ တီးခတ်စွမ်းပါရစေ။
ကျွန်ုပ်အသက်ကို သင့်ကမ်းခြေတိုင်းမှာ မီး အဖြစ် ပူဇော်ပသ လိုက်ပါရစေ။ ။
Posted by mgphonemyint at 4:50 AM2comments:
လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါ . . .
လွတ်မြောက်ခွင့်ပြုပါ . . .
ငါ့အသံကိုမြင်လား ၊ ငါ့စကားကိုကြားလား
ဓါးအိမ်ထဲပိတ်မိနေတယ် . . .
ဥပါဒ် ၊ ဌီ ၊ ဘင်
ပစ်လိုက်တဲ့ ငါဟာ ပင်လယ်ဓမြ ဆန်တယ် ။ ။
Posted by mgphonemyint at 8:00 AM3comments: